यसलाई त्यहाँ मानिसहरू बीचमा साँच्चै प्रसिद्ध हुन चाहनुहुन्छ कि, यस्तो देखा कुनै गोप्य छ। इच्छा बुझ्ने छ। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ: व्यक्तिगत लागि प्राथमिकता के हो?
मानव यस्तो कार्यहरू रूपमा महिमा उपस्थिति आफ्नो काम वा कार्य सकारात्मक मूल्यांकन आपत्ति भने, कि इच्छा प्रशंसनीय छ। उहाँले यो काष्ठफलक हासिल गर्न मद्दत गर्छ, कसरी प्रख्यात सुझाव।
तर जवान (र त्यसैले जवान छैन) मानिसहरूको धेरै सिर्फ प्रसिद्धि को सपना। र यो जो तरिका एक आउन कुरा छैन लक्ष्य। र, सिर्जना कौशल honing र महान कामहरू प्रदर्शन, प्रसिद्ध बन्न देखि, यो कठिन, यस्ता व्यक्तिहरूसित अक्सर बस साधारण बाहिर केहि गर्न एक टाउको "शानदार" विचार आउन छ।
कारण यो सारा इन्टरनेट जो कहिले काँही स्तरका एपिसोडको एक किसिम देखाउन भिडियो, भर छ। निरन्तर मेरो टाउको मा कुट्छ गर्ने प्रसिद्ध, बन्ने संग क्यामेरा अगाडि कूद को विचार मान्छे एक बहु-मंजिल्ला घर कार को छत मा, तंग भइरहेको जनावर वा आफ्नो साथीहरूको मा (फेरि कैमरामैन अघि), जंगली शिकारीहरु संग कक्षहरू मा प्राप्त।
यी deviants केही कुनै पनि हालतमा प्रसिद्धि हासिल गर्न अपराधको प्रतिबद्ध गर्न थाल्छन्। त्यसैले त्यहाँ सिरियल खूनी र चोर छन्। आफ्नो कार्यहरू दुर्लभ क्रूरता फरक र सधैं ठीक आफ्नो सहभागिता मनाउन गर्न द्वारा केही catchy "प्रतीक" सँगसँगै।
तर हामी कसरी रचनात्मक क्षेत्र मा प्रख्यात सोच भएका व्यक्ति कुरा भने, त्यसपछि त्यहाँ आवश्यक कुराहरू आफ्नो मार्ग लिन दिनु हो। तिनीहरूले भन्न रूपमा, गफ दुष्ट कामहरू आफूलाई तपाईं को अगाडी चलिरहेको र असल कामहरूमा घर निहित महिमा।
भने, उदाहरणका लागि, त्यो सुन्दर कविता लेखे, त तपाईं यो मामला मा "सार्न" उनको मद्दत गर्न आवश्यक छ। टिप कसरी पनि इन्टरनेटमा लागू हुन्छ, एक प्रसिद्ध कवि बन्न छ। किनभने वर्ल्ड वाइड वेब आधुनिक संसारमा आफ्नो व्यक्ति ध्यान आकर्षित गर्न एक शक्तिशाली उपकरण हो।
कवि, लेखक, संगीतकार, कलाकार, डिजाइनर, rukodelnikov, कलाकार, संगीतकार र अरूलाई: आज इन्टरनेटमा, त्यहाँ रचनात्मक मान्छे को लागि धेरै पोर्टल हो। तसर्थ, समस्या समाधान एक वा जो बढी लागि दर्ता गर्नुपर्छ खातिर यो व्यक्तिगत लागि रचनात्मक विषयगत ध्यान लागि उपयुक्त छन्।
आफ्नै प्रकारको संग संचार यसको गतिविधिहरु, सामान्यतया तुरुन्तै विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा को परिणाम निःशुल्क प्रकाशन बाहेक देखि आफ्नो सीप गुणस्तर सुधार, सहयोग गर्न, काम समीक्षा तिनीहरूलाई मूल्यांकन छलफल अप राखे।
त्यहाँ प्रतियोगिता मा संलग्न छन् कि विशेष पोर्टल हो। विजेताहरु पहिचान मालिकको निःशुल्क प्रकाशनहरू, recitals प्राप्त गर्नेछ। र उहाँले एकदम राम्रो जवान प्रतिभा मुद्रण उत्पादन वा संगीत डिस्क, प्रकाशक वा प्रमुख निर्देशक को सम्पादक को प्रकाशन संलग्न मानिसहरू ध्यान हुनेछ हुन सक्छ अनलाइन प्रतियोगिता जित्छ भने।
आफ्नो रचनात्मकता प्रचार अर्को तरिका हुन सक्छ: तपाईँको आफ्नै ब्लग, जहाँ उत्पादन राख्न सिर्जना गर्नुहोस्। साँचो, आफ्नो यात्रा एक धेरै घनिष्ठ मित्र र आफन्त हुनेछ कि एक संभावना छ। र यो धेरै राम्रो तरिकाले कल गर्न जानिन्छ गाह्रो छ।
प्रत्येक गायक वा अभिनेता छ व्यावसायिक निर्देशक, आफ्नो काम प्रमोट गर्ने। र इन्टरनेटमा त्यहाँ पदोन्नति र साइटहरु को प्रगति मा विशेषज्ञहरु छन्। तिनीहरूलाई एउटा सम्झौता अन्तिम, तपाईंको ब्लग अरूलाई बीचमा हराएको प्राप्त हुनेछ भयभीत हुन सक्दैन।
खैर, तपाईंको आफ्नै ब्लग सिर्जना, यो सम्भव एक निश्चित notoriety, छैन पनि विशेष प्रतिभा संग, तर केवल operability र लगनशील भई लागिरहेमा हासिल छ। पछि गर्न सक्छन् व्यावहारिक सबैलाई उज्ज्वल फोरम सिर्जना यसको पृष्ठहरूमा प्रकाशित अन्य लेखक, रोचक समाचार को काम, रोमाञ्चक कथाहरू वेबसाइट पर्यटकहरू एक विशाल संख्या आकर्षित। र आफ्नो ब्लग साँच्चै, मूल मजा छ भने, तपाईंको आगंतुकों र प्रयोगकर्ता सक्दैन ध्यान छैन यसको निर्माता गर्न।
व्यर्थ - यो खराब वा असल छ?
कसरी आफूलाई स्वीकार गर्न, बुझ्न र प्रेम गर्न: मनोवैज्ञानिक सल्लाह
के मानिसको बाँया कान मा बाली गर्छ?
लग घरहरू: मालिकको समीक्षा। शैल पोशिश काठको फल्याक को घरहरू निर्माण
साराटोभ पुल - पचास शहर को प्रतीक